पानी पिउने सिसाको गिलास स्वास्थ्यका लागि कति सुरक्षित छ ? – rastriyakhabar.com
पानी पिउने सिसाको गिलास स्वास्थ्यका लागि कति सुरक्षित छ ?
परीक्षण गरिएका १० मध्ये ७ वटा गिलास/टमलरमा लिड र क्याडमियम स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मात्रामा पाइयो । लिड र क्याडमियम दुवै मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् । यस्ता टमलर/गिलासमा बनाइएका बुट्टाका सबै रंगमा र सुनौला पात बुट्टामा लिड पाइयो । क्याडमियमको धेरै मात्रा भने रातो इनामेलमा भेटिएको अध्ययन समूहले बताएको छ ।
‘यस्ता प्रतिबन्धित र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्वहरू चीन, युरोपेली संघ र अन्यत्र बनाइने सिसाका सामानमा किन प्रयोग गरिन्छ ?’ उनले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘उपभोक्ताहरूलाई यसबारे सजग पार्नुपर्छ । साथै खुद्रा विक्रेता र सिसाका सामान उद्योगहरूले सजावटका लागि प्रयुक्त हानिकारक पदार्थ/तत्वलाई सामानबाट हटाउनु पर्छ ।’